हेलोवीन ठूलो पदोन्नति, लाईटिन्थेबक्समा %०% छुट Androidsis
लाइटिन्थेबक्ससामान र टेक्नोलोजीका लागि लोकप्रिय चिनियाँ अनलाइन स्टोर हो हेलोवीन को लागी बिक्री। पदोन्नति क्यालेन्डरमा संकेत गरीएको मिति। र लाइटिन्थेबक्स रोचक प्रस्तावहरू प्रस्ताव गरेर थप्न चाहेको छ। आज हामी तपाईंलाई भन्न को लागी हामीले कुनलाई चयन गरेका छौं।
यो सँधै रमाईलो प्रस्तावहरू र पदोन्नतीहरूको लागि प्रशंसा गरिन्छ। र हामी प्राय जसो केहि भेटिन्छौं जुन उल्लेख गर्न लायक पनि छैन, यो केस होइन। हामीले भेट्टायौं 70 प्रतिशत छुट छ मूल मूल्य भन्दा बढी।
1 हेलोवीनका लागि best उत्तम लाइटइन्थेबक्स सम्झौता
1.1 MGCOOL ब्यान्ड Smart स्मार्टब्यान्ड
1.2 Scishion V88 एन्ड्रोइड 5.1 बक्स टिभी
1.3 Xiaomi Redmi नोट 4
1.4 LeTV ले प्रो3X722
1.5 M8S प्रो एल
1.6 Xiaomi एमआई 5X
2 लाइटिन्थेबक्सले हेलोवीनमा विन्डो बाहिर घर फ्याँकिन्छ
हेलोवीनका लागि best उत्तम लाइटइन्थेबक्स सम्झौता
हामी मितिहरूसँग धेरै नजिक छौं जहाँ तपाईंलाई हो वा हो उपहारहरू खरीद गर्नुपर्नेछ। के हुन्छ यदि हामी परिवर्तनको लागि अलिक दूर दूरदर्शि छौं भने? र, यदि हामी क्रिसमसको लागि उपहार खोज्छौं भने, हामी आफैले केही जिज्ञासु पैसा बचत गर्न सक्दछौं। वा यदि यसको विपरित तपाईं आफै उपचार गर्न चाहानुहुन्छ, किन हेलोवीनमा?
MGCOOL ब्यान्ड Smart स्मार्टब्यान्ड
यदि तपाईंले अझ विशाल परिधान योग्य ब्रह्माण्डको अन्वेषण गर्नुभएको छैन भने, यो उत्तम समय हुन सक्छ। लाइटिन्थेबक्सले हामीलाई ल्याउँछ एक अविश्वसनीय मूल्यमा एक राम्रो स्मार्टब्यान्ड विकल्प। Mgcool ब्यान्ड3मा तपाइँसँग स्मार्टब्यान्डबाट सोध्न सक्ने सबै कुरा छ। क्यालोरीहरू जलाइयो, मुटुको दर मोनिटर, पानी प्रतिरोध, पेडोमिटर र ठूलो स्वायत्तता.
यसको लागि डिजाइन गरिएका कुनै पनि अनुप्रयोगहरू मार्फत एन्ड्रोइड अपरेटि system प्रणालीसँग अनुकूल ब्रेसलेट। यद्यपि तपाई आईफोनमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो संग ip68 प्रमाणीकरण त्यसैले यो splash र कुनै समस्या बिना धुलो को प्रतिरोध गर्दछ। तपाइँको खेलकुदको अभ्यासमा तपाइँसँगै आडियल।
Mgcool ब्यान्ड3एक सुविधा ब्याट्री जुन २०० र २ hours० घण्टा सम्मको गतिविधि समयको लागि प्रतिज्ञा गर्छ। तपाईं आफ्नो गतिविधि ट्र्याक गर्न सक्षम हुनेछ। यसलाई अलार्म घडीको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। निष्क्रियता चेतावनी प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईं पनि हुनेछ गुरुत्वाकर्षण सेन्सर, gyro सेंसर, प्रकाश सेन्सर र निकटता सेंसर। को लागी एक धेरै पूर्ण विकल्प मात्र € २.14,27.००.
यहाँ तपाईको मिग्राकुल ब्यान्ड Buy खरिद गर्नुहोस् लाइटिन्थेबक्समा उत्तम मूल्यमा.
Scishion V88 एन्ड्रोइड 5.1 बक्स टिभी
अर्को वर्षको लागि अर्को क्रिसमसको लागि उपहार मध्ये एक बन्ने अर्को उम्मेद्वार। एन्ड्रोइड टिभी बक्स तपाईंको मनपर्ने मल्टिमेडिया सामग्रीहरू टेलिभिजनमा उपभोग गर्न सक्षम हुन। यो लाइटिन्थेबक्सले पदोन्नतिको रूपमा प्रस्ताव गर्ने मूल्यमा विचार गरी बढी चाखलाग्दो विकल्प हो।
यो छ RK3229 CPU जुन क्वाड कोर प्रोसेसरको साथ काम गर्दछ। र यद्दपि यसको अपरेटिंग प्रणाली भर्खरको होइन, Android sol.१ यस उपकरणको लागि solvency को साथ काम गर्न पर्याप्त हुनेछ। यदि तपाईंसँग घरमा अझै छैन भने, यो उत्तम अवसर हुन सक्छ केवल १eयूरोमा एउटा प्राप्त गर्न।
यहाँ उत्तम मूल्यमा लाइटबिन्थेबक्समा सिशिion्ग V88 खरीद गर्नुहोस्.
शाओमी फर्मको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छैन। र शिओमी रेडमी नोट about को बारेमा तपाइँलाई धेरै कुरा भन्न आवश्यक छैन। यस अवस्थामा हामी पनि एक सबैभन्दा शक्तिशाली संस्करणको बारेमा कुरा गर्दैछौं। को Xiaomi Redmi नोट4को आफ्नो संस्करण मा GB जीबी र्याम र GB4जीबी भण्डारण.
हामी सिद्ध उपकरण भन्दा बढि कुरा गर्दैछौं। उनको नाम र प्रसिद्धि उनको अघि संग एक स्मार्टफोन १.5,5..XNUMX इन्च स्क्रीन. तेह्र मेगापिक्सेल रिजोलुसनको साथ क्यामेरा। फिंगरप्रिन्ट रिडर। र सबै चीज यसको लागि पूर्ण रूपले काम गर्दछ क्वालकम स्नैपड्रैगन 625२। प्रोसेसर। लाइटिन्थेबक्सले घर विन्डो बाहिर फ्याँकि दिन्छ र हामीलाई १ 150० भन्दा कम युरोको लागि प्रस्ताव गर्दछ।
यहाँ तपाईं Xiaomi Redmi नोट4एक अविश्वसनीय मूल्य मा खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
LeTV ले प्रो3X722
LeTV, हाम्रो देश मा अलि बढाइ पूर्णांक द्वारा थोरै फर्महरु को अर्को। अर्को ब्रान्ड जसले हामीलाई स्मार्टफोन ल्याउँछ जसले राम्रो मूल्यमा प्रदर्शन र गुणवत्ता प्रदान गर्ने सम्भावनाको उदाहरणहरू देखाउँदछ। LeTV Le PRO3X722 एक स्मार्टफोन यति शक्तिशाली छ कि यो सुन्दर छ.
एक टर्मिनल जसले यसको प्रदर्शनको लागि आश्चर्य गर्दछ, यसको डिजाईन र यसको प्रदर्शनको लागि अझ बढि। हामी अर्को उपकरणको साथ कुरा गर्छौं GB जीबी र्याम 4२ जीबीको भण्डारणको साथ। यो छ १२ मेगापिक्सेल फोटो क्यामेरा. फिंगरप्रिन्ट रिडर र .5,5..XNUMX मेगापिक्सल प्रदर्शन। लाइटिन्थेबक्सको यो प्रस्तावको साथ तपाईं यसलाई १ 150० यूरोमा मात्र पाउन सक्नुहुनेछ।
राम्रो मूल्यमा LeTV Le PRO3X722 खरीद गर्नुहोस्।
M8S प्रो एल
यदि अघिल्लो एन्ड्रोइड "बक्स टिभी" जुन हामीले अगाडि प्रस्ताव गरेका छौं "फिक्री" देखिन्छ वा तपाईंलाई यो छोटो लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ भने, हामी तपाईलाई अझ शक्तिशाली विकल्प ल्याउँछौं। M8S PRO L सुविधाहरू Android 7.1 त्यसैले तपाइँका सबै अनुप्रयोगहरू अद्यावधिक गर्न सकिन्छ र तपाइँसँग कुनै पनि मिल्दो समस्या हुनेछैन।
थप रूपमा, M8S PRO L शक्तिको गर्व गर्दछ युट्यूब वा नेटफ्लिक्सबाट स्ट्रीमिंग भिडियोहरूमा तपाईंलाई अल्ट्रा एचडी रिजोलुसन प्रदान गर्दछ। तपाईंको बैठक कोठामा टेलिभिजनमा गुणस्तर र रिजोलुसन। उसको अमलोगिक S912 अक्टा-कोर सीपीयू र एआरएम माली- T820MP3 GPU तिनीहरूले ठूलो प्रदर्शन प्रस्ताव।
यदि तपाईं आफ्नो टेलिभिजनमा एक उपकरण चाहनुहुन्छ तपाईंको गुणस्तरको साथ तपाईंको मनपर्ने चलचित्रहरू र भिडियोहरू पुन: उत्पादन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि उपकरण हो। लाइटिन्थेबक्सले हामीलाई हेलोवीन पदोन्नतिमा यस्तो मूल्यमा प्रस्ताव गर्दछ जुन तपाईं होईन भन्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईं संकेत गरिएको प्रस्तावको लागि पर्खदै हुनुहुन्थ्यो भने, यो यहाँ छ। 8 45,86. .XNUMX युरो को लागी MXNUMXS PRO L खरीद गर्नुहोस्.
Xiaomi एमआई 5X
अन्तमा, र तपाईले देख्नु भएको छ कि त्यो खराबको लागि होइन, हामी चिनियाँ फर्मको सबैभन्दा नयाँ प्रक्षेपणको सबैभन्दा राम्रो मूल्यमा किन्न सक्छौं जुन सब भन्दा बढ्दो छ। शाओमी मी X एक्स यससँग सबै थोक छ जुन "नवीनतम" स्मार्टफोनले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न सक्दछ.
पछाडि गोलो रेखाको साथ एक धेरै सफल डिजाइन। यसले हामीलाई हालको लाइनहरूमा Xiaomi को विकास देखाउँदछ। लाइटिन्थेबक्सले यसको Xiaomi को संस्करणमा प्रस्तुत गर्दछ GB जीबी र्याम र of4ROM को एक अपूरणीय मूल्यमा। यदि तपाइँ तपाइँको स्मार्टफोन परिवर्तन गर्न को लागी एक राम्रो अफर को लागी प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने, अगाडि नहेर्नुहोस्।
यो Xiaomi छ .5,5..625 इन्च स्क्रीन र क्वालकॉम स्नैपड्रैगो XNUMX२। अक्टा कोर प्रोसेसर। र एक अविश्वसनीय संग एलईडी फ्ल्यासको साथ १२ मेगापिक्सल डुअल क्यामेरा. फिंगरप्रिन्ट रिडर पछाडि, र एक उदार संग 3000००० mAh ब्याट्री.
तपाइँको शाओमी मी GetX यहाँ एक डरलाग्दो मूल्यमा पाउनुहोस्, € 177,85।
लाइटिन्थेबक्सले हेलोवीनमा विन्डो बाहिर घर फ्याँकिन्छ
तपाइँले तपाइँका लागि छनौट गर्नुभएको प्रस्तावहरूको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? यदि तपाईंले पहिरिन योग्यको निर्णय गर्नुभएन भने, तपाईंले राम्रो अवसर फेला पार्नुहुने छैन। हामीले तपाईंलाई सल्लाह दिएका छौं एक मूल्य मा एक धेरै पूर्ण गतिविधि कंगन जुन तपाइँ फेला पार्नुहुने छैन। यसलाई दिनुहोस् वा यसलाई दिनुहोस्, तर यो प्रस्तावलाई नभुल्नुहोस्।
यदि तपाईले चाहानु भएको थियो भने तपाईंको बैठक कोठामा मल्टिमेडिया सामग्रीको साथ अन्तरक्रियाशीलता दिनुहोस् मनपर्ने हामी तपाईंलाई दुई विकल्प देखाइएको छ। एउटा सस्तो जुन टेलिभिजनमा भिडियोहरू, श्रृंखला र चलचित्रहरूको मजा लिन पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र एउटा जुन उही उद्देश्यको लागि काम गर्दछ तर शक्ति र गुणको प्लससँग।
र यदि तपाईंलाई के चाहिन्छ अन्तमा तपाईंले लिनुहुने त्यो अप्रचलित स्मार्टफोन परिवर्तन गर्नु हो भने, हामीले तपाईंको लागि पनि सजिलो बनायौं। यो अवस्था मा हामी एक विजयी घोडा मा शाओमी संग शर्त। र ती दुई विकल्प मध्ये एक पक्का हिट हो। यो उपलब्ध बजेटमा मात्र निर्भर गर्दछ। प्लस पनि हामी LeTV एक मौका दिन्छौं, एक फर्म जुन हरेक पटक जित्दै छ हाम्रो देशमा अधिक अनुयायीहरू सुन्दर, शक्तिशाली उपकरण र राम्रो मूल्यहरु को लागी धन्यवाद।
हामी आशा गर्दछौं कि लाइटिन्थेबक्स अफरबाट हाम्रो सब भन्दा चाखलाग्दो उत्पादनहरूले तपाइँको सेवा गर्दछ। आफैंमा लिप्त हुन आवश्यक छ, आवश्यक परिवर्तन गर्नुहोस्, वा क्रिसमस शपिंग अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईको केस जस्तोसुकै भए पनि हामीसंग त्यस्तो चाखलाग्दो मूल्यहरूमा त्यस्तो गुणको कमै मात्रा छ। तपाई कतिवटा किन्न जाँदै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » हेलोवीन ठूलो पदोन्नति, लाईटिन्थेबक्समा %०% छुट